Sida loo codsado dhalashada | Macluumaad loogu talagalay muhaajiriinta iyo qaxootiga | USAHello
Sida loo codsado dhalashada
Ma rabtaa in aad si aad u barato sida loo codsado dhalashada? Ka hor inta aadan codsan dhalashada, aad u baahan tahay in la ogaado: aad xaq u leedahay in ay noqoto muwaadin Mareykan ah? Aad u ogaato haddii aad xaq u leedahay inaad codsato. Markaas bartaan tallaabooyinka aad u baahan tahay in aad qaadato si aad u dalbato jinsiyadda.
Waa maxay shuruudaha dhalashada Mareykanka?
Haddii aad rabto inaad codsato dhalashada, in aad marka hore u baahan tahay si aad u ogaato haddii aad noqotay shuruudaha dhalashada. Kuwaas waxaa ka mid:
Ugu yaraan 18 sano jir
Ku noolaa USA ugu yaraan shan sano oo degan
No safarada dheereeyey out of USA
No hawlaha waaweyn ee dembiyada
fahamka asaasiga ah ee dowladda Mareykanka iyo taariikhda
Awooddooda akhriska, qori oo ku hadlin Ingiriisiga aasaasiga ah
Read ku saabsan looga baahan yahay dhalashadas si faahfaahsan oo dheeraad ah si loo hubiyo in aad xaq u leedahay. Markaas waxaad dalban kartaa dhalashada.
Codsashada dhalashada noqon karaan kuwo lagu wareero. Haddii ay suurtagal tahay, waxaannu ku talinaynaa in aad leedahay caawimaad qareen aad. Waxa ay noqon karaan kuwo qaali ah, laakiin waxaa laga yaabaa in aad awoodid in aad heli xor ah oo qiimo-yar sharci I caawi online iyo bulshadaada.
1. Buuxi foomka N-400 ee
Tallaabada ugu horreysa waa in la buuxiso arjiga waddaniyaynta. Tani waa qaab dawlad loo yaqaan N-400. Waxaad u diri kartaa foomka oo aad buuxisay in mail ama waxaad codsan kartaa online. Download foomka N-400 ama ka codsan online.
Muhiim: ka December 2019, USCIS waxaa aqbalay oo keliya 2019 foomka. Hubi in qaab kasta oo aad buuxinta uu leeyahay this hoose ee bog kasta: Form N-400 Edition 09/17/19. Haddii waxa ay leedahay taariikh ka duwan, download foom cusub iyo dib u bilowdo.
Waxaad si ay u ka mid ah waraaqaha badan codsiga iyo sidoo kale in aad bixiso kharashka. Halkan waxaa ah liiska waxa aad u baahan tahay inaad ku darto marka aad soo gudbiso codsiga N-400. Waxaad si ay u ka mid ah laba photos baasaboor codsigaaga. Xusuusnow in aad qorto "A-lambarka" on dambe ee photos, kuwaas oo. Dadka qaar waxay codsan kartaa dhaafitaanka ujrada ah sidaas darteed uma baahnid in aad bixiso kharashka.
Haddii aad buuxinta aad waraaqaha aan qareen, website-ka oo lacag la'aan ah CitizenshipWorks.org kaa caawin doonaa iyada oo loo marayo tallaabooyin codsiga. Citizenshipworks sidoo kale aad ku xidhan karto caawinaad sharci oo lacag la'aan online ama garab Citizenshipworks ah meesha aad degan tahay haddii aad u baahan tahay gargaar dheeraad ah.
Codsashada dhalashada inta badan kharash $725. Tan waxaa ku jira kharashka jismiyeed ee $85 iyo ujrada xaraynta oo ka mid ah $640. note Muhiim ah: Dowladda Maraykanka ayaa sheegay in ujrada xaraynta wuxuu kordhin doonaa wax ka $640 in $1,170 muddo ka dib December 16, 2019. Haddii aad rabto inaad codsato dhalashada, hadda codsan iyo in ka badan badbaadiyo $500. Waad awoodaa dheeraad ah ka akhriyi ku saabsan isbedelka la soo jeediyey.
Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho dhaafitaanka ujrada ah haddii aad muujin kartid in aad dakhli ku filan tahay hooseeyo ama haddii aad qabto xaaladaha degdegga ah aan la filayn, kharashka sida caafimaad sida. dhaafitaanka A ka dhigan tahay in aadan bixin doontaa. Waxaad ka akhriyi kartaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo codsato kacafis. note Muhiim ah: nidaamka tanaasulka ku beddeli karaan 2020. Waad awoodaa dheeraad ah ka akhriyi ku saabsan isbedelka la soo jeediyey. USAHello soo jeedinaya aad u hesho talo sharci ah haddii aad ka fekereyso inaad ku saabsan codsiga ka cafinta, sababtoo ah waxa ay ku siin karaan USCIS sabab lagu diido codsigaaga.
Muhiim: Samee nuqul ka mid ah N-400 ka hor inta aadan u soo dir.
2. Keydso rasiidka iyo hubi codsiga online
Waxaad heli doontaa warqad ah la helo in ayaa sheegay in USCIS helay codsigaaga. Ka dhig iyo ku qor lambarka rasiidka 13 lambar ah. Qaado sawir helo on your phone iyo email u naftaada si loo hubiyo in aadan u lumin. Waxaad isticmaali kartaa lambarka rasiidka in hubi xaaladda codsigaaga.
3. Buuxi aad baaritaanka jismiyeed
baaritaanka Biometric waa jeeg ammaanka ah. Waxaa lagu weydiin doonaa in aad tagto xafiis at maalin gaar ah iyo waqti. Hubi inaad ballanta this tago oo timaadid waqtiga! Marka ballantii, ayay qaadi doonaan farahaaga. Taas macnaheedu waxay noqon tuntay doonaa faraha iyo ordi sawirka iyada oo loo marayo nidaam si loo hubiyo in aadan dambi ah. badan oo ku saabsan Baro astaan ​​ballan.
4. Ka qaybgal wareysi dhalashada aad
Buuxi wareysi uu siiyay Sarkaalka United States Citizenship and Immigration a. badan oo ku saabsan Baro wareysiga jinsiyadda iyo sida loo diyaariyo imtixaanka.
5. Qaado imtixaanka cilmiga bulshada
Inta lagu guda jiro wareysigaaga, waxa aad qaadan doonta tijaabo ah oo ku saabsan cilmiga bulshada Maraykanka, taariikhda iyo dawladda. On imtixaanka this, waa in aad ka jawaabto 6 ka mid ah 10 su'aalaha si sax ah. Waxaad qaadan kartaa dhalashada dhaqanka kedis si aad u aragto haddii aad diyaar u tahay imtixaan waa. Haddii aadan diyaar u, aad ku biiri karto our fasalka dhalashada free si aad isu diyaariso imtixaanka.
6. Sug ilaa inta ay go'aan
Waxaad heli doontaa go'aan qoraal ah ka USCIS oo ku saabsan codsigaaga. Waxaa laga yaabaa inaad hesho go'aanka maalinta aad wareysiga ama laga yaabo in aad mar dambe loo heli boostada. Go'aanka waxaa la odhan doonaa haddii codsigaaga ahaa:
siiyay (taas macnaheedu waa in aad maray!)
Continued (Tan waxaa looga jeedaa USCIS sameynayo cilmi baaris dheeraad ah oo adiga kugu saabsan ama ay ka dhigan tahay waxaa laga yaabaa inaad ku guuldareysatay imtixaanada Ingiriisi ama Civics. mar waxaad iyaga ku qaadan kartaa.)
beeniyay (Tan waxaa looga jeedaa USCIS go'aansaday xaq uma lihid waddaniyaynta. Haddii ay taasi dhacdo, Waxaa laga yaabaa in aad awoodid in aad codsan.)
7. Timaaddo xafladda muwaadinimada aad
Haddii aad ku dhex, aad diyaar u ah inay buuxiyaan Munaasabada dhalashada iyo dhaarinayaa Daacad Noqoshada noqon doonaa. Tani waa marka aad ballan qaadayaa daacad u ahaanta USA.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan geedi socodka, waxaa ka jira ururo aad wici kartaa. Ururadani waxay bixiyaan talo ku qoran luqado cusub qaar ka mid ah. Raadi caawimo dhalashada bilaash ah ama qiime jaban kuu dhow.
Waxaan la rajeeyo gacan ka jawaabo su'aasha ku saabsan sida loo codsado dhalashada. Saxiix hoose si aad u qaadato fasalada our dhalashada free diyaarinta. Waxaad qaadan kartaa online, meel kasta oo, mar walba!
Sida loo buuxiyo foomka N-400
Waa maxay wareysi imtixaanka jinsiyadda ah?
Waa maxay su'aalaha waxaa lagu weydiin doonaa in aan imtixaanka dhalashada?
Sida loo helo kaarka cagaaran ama deganaanshaha rasmiga ah
Ogow xuquuqdaada sida muhaajir
Ogow xuquuqdaada qaxooti ahaan
Macluumaadka on this page ka timaadaa USCIS. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.